Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Toronto ilaa Orlando ee Swoop hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaadkii ugu horreeyay ee ka yimaadda Madaarka Caalamiga ah ee Toronto Pearson wuxuu astaan ​​muhiim ah u yahay shirkadda dayuuradaha Kanada ee aan aadka u qaaliga ahayn markay korayso shabakadda Maraykanka.
Daahfurka maanta ayaa bilaabay kii ugu horreeyay afar waddo oo cusub oo aan joogsi lahayn oo loo aado Madaarka Caalamiga ah ee Orlando Sanford si loogu helo diyaaradda qiimaha jaban.
Adeegga daah-furka diyaaradda oo ah mid aad u jaban ayaa ka duushay Madaarka Caalamiga ah ee Toronto Pearson 8:00 am EST wuxuuna si nabad ah ku yimid 11:00 am waqtiga maxaliga ah.
Swoop waxay ku jirtaa hawlgal ah inay ka dhigto safarka mid la awoodi karo oo ay heli karaan dhammaan dadka reer Kanada.
Maanta, Swoop waxay u dabaaldegtay duulimaadkeedii ugu horreeyay Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Orlando Sanford. Adeegga daah-furka diyaaradda oo ah mid aad u jaban ayaa ka duushay Madaarka Caalamiga ah ee Toronto Pearson 8:00 am EST wuxuuna si nabad ah ku yimid 11:00 am waqtiga maxaliga ah.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ballaarinno shabakadeena Mareykanka markaan bilowno duulimaadkii ugu horreeyay ee maanta Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Orlando Sanford, ”Ayuu yiri Shane Workman, Madaxa Hawlaha Duulimaadka, Dheeri. "Waxaan ognahay in dadka Kanada ay aad u xiiseynayaan inay u safraan koonfurta Florida oo qorrax leh jiilaalka iyo ku habboonaanta Madaarka Caalamiga ah ee Orlando Sanford, helitaanka iyo u dhowaanshaha meelaha soo jiidashada leh ayaa ka dhigaysa albaabka ugu habboon ee gobolka."
Furitaankii maanta ayaa bilaabay kii ugu horreeyay afar waddo oo cusub oo aan joogsi lahayn Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Orlando Sanford loogu talagalay diyaaradda qiimaha jaban ee aadka u jaban. Bilaha soo socda, DheeriAdeegga dheeraadka ah ee aan joogsiga lahayn ee Orlando Sanford ayaa lagu wadaa inuu ka bilowdo Hamilton, ON, Winnipeg, MB iyo Edmonton, AB.
Faahfaahinta adeegga Swoop ee Orlando Sanford
wadada Taariikhda Bilowga Qorshaysan Joogtaynta Toddobaad ee ugu sarreysa
Toronto (YYZ) - Orlando Sanford (SFB) October 9, 2021 3x Toddobaadle
Hamilton (YHM) - Orlando Sanford (SFB) November 1, 2021 2x Toddobaadle
Edmonton (YEG) - Orlando Sanford (SFB) December 3, 2021 2x Toddobaadle
Winnipeg (YWG) - Orlando Sanford (SFB) December 10, 2021 2x Toddobaadle
Dheeri waa gaadiid qaali ah oo aad u jaban oo Kanadiyaan ah oo ay leedahay WestJet. Waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay Sebtember 27, 2017, waxayna duulimaadyadu bilaabatay Juun 20, 2018. Shirkadda duulimaadku waxay ku taal Calgary waxaana loogu magacdaray rabitaanka WestJet ee ah “inay ku soo booddo” suuqa Kanada oo leh qaab ganacsi oo cusub.